Ungawusebenzisa njani amaxabiso e-Algorithmic ukunyusa iinzuzo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 12, 2016 NgoLwesihlanu, Februwari 12, 2016 Douglas Karr
Njengomthengisi weelebheli zabucala, injongo yakho kukwandisa inzuzo kwiimveliso zelebheli zabucala. Amaxabiso yeyona nto ibaluleke kakhulu ekuchaphazeleni ingeniso yakho-kwaye ngenxa yoko ifuna ingqalelo yakho epheleleyo. Kodwa ungazi njani ngokuqinisekileyo ukuba awunamaxabiso kwiimveliso zelebheli yakho yabucala esezantsi kakhulu?
Unokushiya imali etafileni ongayaziyo. Okanye mhlawumbi unamaxabiso aphezulu kakhulu kwaye awuvelisi ukuthengisa okuninzi ngangokunokwenzeka. Ngelixa ileyibhile yabucala ngokuqinisekileyo iyindlela yokukhulisa ishishini lakho kwihlabathi lanamhlanje elikhuphisanayo lokuthengisa, ukuhlala phambili kukhuphiswano ngundoqo kwimpumelelo yakho.
Isisombululo samaxabiso seelebheli sabucala senzelwe ngokukodwa abathengisi beelebheli zabucala-njengawe. Ukuzilolonga okuzenzekelayo kuya kukunceda ukuba wandise imida yakho yenzuzo kwiimveliso zelebheli zabucala, ekugqibeleni ukukhawulezisa ukukhula kwelebheli yeshishini lakho.
Kutheni ufuna amaxabiso ealgorithmic kwiimveliso zelebheli zabucala
Eyona nzuzo -Awuzukuphinda uqikelele amaxabiso akho kwakhona. Ixabiso lealgorithmic liwususa umngcipheko wokushiya kwakho imali etafileni ngokufumana elona xabiso lokuqinisekisa ngenzuzo elungileyo kwimveliso nganye yeelebheli zakho zabucala.
Ukonga ixesha -Awuzukufuneka usete ngokwakho amaxabiso kwakhona. Ukulawula amaxabiso kwimveliso nganye kuthatha ixesha elininzi, kwaye kungathatha iiyure zosuku lwakho. Kude kube ngoku, akukho sisombululo sexabiso sikhona kwiimveliso zelebheli zabucala. Isisombululo sethu esizenzekelayo sikhulula ixesha lakho ukuze ugxile ekugcwaliseni kwakhona, ukukhangela kunye neminye imisebenzi ebalulekileyo eyimfuneko ukukhawulezisa ukukhula kwelebheli yakho yabucala.
Ulawulo kunye nozinzo - Unolawulo lwempahla yakho kunye nemarike.
Kwindawo yomthengisi engalindelekanga yeAmazon- unolawulo olupheleleyo malunga nokuba ungakhawuleza okanye ucothe kangakanani ukuthengisa iimveliso zakho- kuxhomekeke kwiimeko zakho zeshishini ezizodwa.
Lisebenza njani ixabiso lealgorithmic?
Akukho sidingo sokufaka nayiphi na imigaqo okanye uchonge naziphi na iimveliso zesalathiso. Izilungiso zethu zokuzifundela zikhaba ngokukhawuleza xa ufaka ixabiso lakho lesilingi kunye nexabiso lomgangatho, kwaye konke okunye kuzenzekelayo.
Unokuseta usuku ekujoliswe kulo ngaphandle kwestokhwe okanye usixelele ukuba zingaphi izinto ongathanda ukuzithengisa ngosuku.
Umhla wokuphelelwa kwitokhwe -Sixelele into ekujolise kuyo ngaphandle komhla wesitokhwe, kwaye ii-algorithms zethu ziya kuchaza elona xabiso liphezulu kunye nesantya sentengiso esiya kuqinisekisa ukuba uthengisa ngalo mhla.
[ibhokisi yohlobo = "inqaku" lungelelanisa = "ulungelelwaniso" iklasi = "" ububanzi = "90%"]Umzekelo: Ukuba kufuneka ufumane isitokhwe esitsha esivela kumvelisi wakho kwinyanga yokuqala ezayo kwaye ufuna ukulahla isitokhwe sakho sangoku ngelo xesha, sazise umhla ngqo kwaye siya kuqinisekisa ukuba yonke impahla yakho icociwe kweyona Ixabiso elinokubakho, ngaphambi kokuba kungene isitokhwe esitsha. [/ ibhokisi]
Ithagethi ngesantya - Qinisekisa ukuba awuthengisi ngokukhawuleza okanye unamathele kuludwe lwempahla ehamba kancinci. Sitshele ukuba zingaphi izinto ofuna ukuzithengisa ngosuku, kwaye ii-algorithms zethu mazikhathalele ezinye.
[box type = "note" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Umzekelo: Imfuno yentengiso inyukile kwaye uthengisa izinto ezininzi kunokuba ubucwangcisile. Ngeli nqanaba, uza kuthengisa ngeveki kodwa isitokhwe sakho esitsha sifika kuphela kwiiveki ezimbini. Kunqande ukuphulukana nenqanaba lephepha ngokuqinisekisa ukuba awuthengisi de ube ungena kubonelelo olutsha. Lawula isantya sentengiso yakho ngokusixelela ukuba zingaphi izinto ongathanda ukuzithengisa yonke imihla. [/ Ibhokisi]
Izibonelelo ezongezelelweyo zoMcebisi
Njengengxenye ye Iphakheji yelebheli yabucala yesondlouya kufumana:
yethu ishishini lobukrelekrele beshishini -Ibandakanya iideshibhodi ezinomdla, iingxelo ezinzulu kunye nezilumkiso zemihla ngemihla zokukunceda wenze izigqibo ezichanekileyo zeshishini:
Ideshibhodi ibonelela ngesishwankathelo sepanoramic kunye nobuchule bokuntywila ngokunzulu, ikunika uhlalutyo olutyebileyo lweendleko zakho, ukuthengisa, amaxabiso esitokhwe kunye nendawo yemakethi.
Iingxelo zethu gqamisa iseti etyebileyo yedatha onokuyicoca kunye nedayisi ngokweeparameter ezahlukeneyo, ngokuhambelana neemfuno zakho zeshishini.
Izilumkiso ukuqaqambisa ulwazi olubalulekileyo, njengaxa izinto ezithile zingasenangeniso, xa izinto zakho ezithengiswa kakhulu ziphela kwisitokhwe, kwaye xa kufuneka ucime uluhlu lweempahla ezihamba kancinci.
A umphathi ophumeleleyo kumthengi Ngubani oza kukukhokela ekukhuleni kwishishini labucala labucala. Iqela lethu lempumelelo kubathengi lenziwe ziingcali zeAmazon kunye neengcali zezezimali- ke unokuqiniseka ukuba usezandleni ezilungileyo.
Jonga ukuba uMcebisi unokufikelela ntoni kwishishini lakho leelebhile labucala laseAmazon!
Ukukhawulezisa ishishini leelebheli labucala laseAmazon
tags: Ixabiso le-algoIxabiso lealgorithmicnokondla